Heano Maitiro Ekuti Iwe Usapiswe neIye Influencer Kushambadzira | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 3, 2014 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Takanyora kare nezve misungo yekushambadzira kushambadzira. Semunhu anoripirwa nguva nenguva se kuchinja, Ndine chokwadi chekuti vangani vanofurira hukama hwekutengesa ndewe setup.
Case in point, pakutanga kwegore rino ndakakokwa ku Brickyard nekuti ndiri wemuno kuchinja pasocial media. Paive neboka revanhu vakakokwa kubva pasocial media - vese vaine zvibodzwa zvakakwirira pane yakakurumbira yekukora injini ye Indianapolis. Iyo track yakapa yekupaka mapasipoti uye suite matikiti uye ndokuenda zvese kunze nechiitiko. Ini handina kuenda chaizvo - ndakaita mhirizhonga paminiti yekupedzisira.
Imwe yeshamwari dzangu yakaenda uye akasekesa kuti sei, pane imwe nguva, mutyairi ane mukurumbira akafamba navo uye hapana kana akatozviziva ... vaifanirwa kubvunza kuti aive ani vasati vakanda mapikicha kunze kwenhau. Iko kuputika! Mushandirapamwe wekukanganisa wakarasikirwa pane ese masirinda (zviwane?) Uye ini ndakaedza chaizvo kubata iyo track iyo nguva yandakakokwa kuti ndive nechokwadi chekuti havana kutambisa mari yavo. Hapana akambondifonera zvakare. Ini ndaitova pachiitiko apo ini ndakakumbira imwe nguva nemunhu akakosha arikubatsira kusimudzira nzira ... akandikwesha, futi.
Pane zvinhu zvitatu zvakanangana nezvebudiriro influencer kushambadzira zano uye mushandirapamwe uyu wakarasikirwa navo vese:
I vateereri vemutambo wekupesvedzera vateereri vauri kuedza kusvika? Iyo track ingadai yakave iri nani kure kukoka vanhu vane zana vateveri vanofarira mujaho pane neni vane 100k vateveri vayo ini ndisingazive kana paine hanya nezvemujaho nekuti ini handimbotaure nezve mujaho.
Paive ne nyaya yekufurira yekugovana nevateereri vavo izvo zvaizonzwika? Kuratidzira kumusoro, kudya chikafu chemahara, kunwa doro, uye kuenda kumatraji mahara haisi nyaya. Zvingadai zvakave zvinoshamisa kuti iyo nzira inotaura nezve kubatana kwemhuri, nhoroondo, vatyairi, tekinoroji… chero chinhu kunze kwemifananidzo yedoro.
Paive ne daidzira kuzviito kuyera kukanganisa yemushandirapamwe? Zvakanaka, saka panogona kunge paine spike mugove-yezwi-zuva iro nekuti vese ava vanokurudzira vanhu vakataura nezve Brickyard. Haha! Ndiri kuseka zvachose - pakange pasisina spike nekuti kwaive kwatove nemazana ezviuru evateveri chaivo vaitaura nezvemujaho! Vaya vanokurudzira havana kuchinja chero chinhu.
Kana icho chinangwa chaive chekutora vanhu kubva kunze kweiyo fan fan kuenda kunzira, hazvina kubatsira. Handina kunzwa nyaya yaimanikidza…. pachokwadi ndakanzwa HAPANA nyaya kunze kweshamwari yangu aiseka zvekutenga tikiti remahara. Idzo nyaya dzaida kutaurwa dzinofanirwa kunge dzakabatana mazano anonamira muchisarudzo chedu chekutenga.
Zvakawanda zvakanyanya zvaigona kunge zvakaitwa kuti vanhu vazvidavirire avo vakashanya ipapo. Zvichida kabhuku kekuita musangano wavo unotevera wemagariro munzira, pamwe kodhi yekudzora yekugovana nevanhu nezvenzira iyi, pamwe runyorwa rwema tweets, mhedzisiro uye ops emifananidzo zvakabatanidzwa kuita nevashandisi nezvenyaya dzekuti nei vachifanira kuenda kunzira, ndezvipi zviitiko zviri kuuya zvinotevera uye kupi kwekutenga matikiti.
Kana iwe uchizobhadhara kana kupa chimwe chinhu kune vanokurudzira, ita shuwa kuti ichakushandira iwe! Ini handipikisane neanokurudzira kushambadzira zvachose, zvinongova kuti hazvisi nyore sekutarisa kumusoro vanokurudzira pane imwe saiti uye nekuvakanda vese matikiti emahara. Izvi zvaigona kuve zviri nani kwazvo!
Tags: zvidhinhaindianapolis mujahosimbakushambadzira kushambadzirakloutnhangemutange
Iwe Unoziva Here Musiyano Pakati peDhijitari Siginecha uye E-Siginecha?